Cinaa Qaama Keenyaa Oromoo Matakkal Haa yaadannu -
Jaarroleen biyyaa bara 1987 hanga Finfinneetti dhufanii waa’ee Oromoon mirga dhabuu iyyatanillee hiika hin arganne;
Bara 1986 waraanni irratti banamee namootni heeddun dhumaniiru, manni gubateera, qabeenyis barbadaa’ee jira;
Namni 30 Naqamteetti ergamani Afaan Oromoon leenjii barsiisummaa argatanii yoo deebi’anis ‘Kun biyya Oromoo miti, yoo barbaaddan biyya isaa dhaqaa barsiisaa, kanaan achi yoo waan biraan leenjii keessan hin fooyyessitan ta’e Afaan Oromootiin hojii hin argattan’ jedhamanii waan baratan gatii akka dhabu godhamee jira;
Uummatni martinuu yeroo saba isaatiin gurmaa’u Oromoon dhorkamee jira. Qaama Dh.D.U O irraa namootni Oromoota Waanbaraa gurmeessuuf dhufan qaama aanaa kanaan ari’amanii tarkaanfiin tokkoyyuu hin fudhatamne;
Oromoon dhaloota biyyaa ti malee abbaa biyyaa miti (ye haager tewallajji injii ye haager baale beet ayidellem) jechuudhaan erga abbaan biyyaa argaate dhuftuun (maxxee) irratti dhalatte ammo argatti jechuun ijoolleen Oromoo carraa barnoonta ol aanaa fi hojii akka hin arganne balballi itti cufameera. Haala adda addaan utuu sabummaan isaanii hin beekamin yoo miliqanii keessa darbanis guddina akka hin arganne godhamuudhaan gocha Afriikaa Kibbaa durii waliin wal fakkaatu naanichaan raawwatamaa jira;
Mirga hawaasaa fi siyaasaan alas gama dinagdee fi haaqa seeraan loogiin hojjetamu Oromummaa Oromoota aanaa kanaa irratti dhiibba guddaa gochaa jira.
Ijoolleen Oromoo filmaata dhaban Oromummaa isaanii jijjiiranii Sinishuummaatti galmaa’uudhaan hojii argachuuf dirqamaa jiru. Kunis uummaticha haasofsiisuun kan mirkanaa’uu danda’amuu dha; akkasumas,
Ummatni Sinichoo duris ammas zooniidhuma Matakkalaa aanaaleedhuma durii sadan armaan olitti eeraman keessa qofa jiratu. Garuu lakkoofsa bara 1984tiin (A.L.A) 17,840 ture irraa bara 1994 (A.L.A) waggaa kudhan keessatti 14,265 dabaluudhaan gara 32,105tti ol guddachuun isaanii lakkoofsi Oromoo garuu akka gadi qabamu loogiin godhamuu isaa sirriitti mul’isa. Utuu dhugaadhaan %2.9 tiinuu shallagamee (projection) Oromoon Zoonii Matakkalaa utuu warra zoonii kaaniiyyuu hin dabalatin gara 74,588tti, kan Sinichoos gara 32,105tti utuu hin ta’in gara 23,975tti guddata ture. Amma garuu kan mullatu Oromoon waggaa kudhan keesaa % 1 gadiin, Sinichoon ammoo % 6 tiin akka dabalaniidha. Kun ammo kan dhugaa irraa baayyee fagaatee ta’uun isaa ifa. Xinxala istaatistiikii armaan gaditti gabateen kaa’ame irraa hubachuun ni danda’ama.
Xiinxala Baayyina Uummata Oromoo Matakkalaa kan Lakkoofsa Estaatistikii Bara 1984 fi 1994 A.L.A Irratti Hundaa’e
Maddeen odeeffannooKutaa 2ffaa barruu kanaa keessatti furmaata malu irratti xiyyeeffanna.
Manguddoota biyyaa naannichaa
Waraqaa qorannoo eebbaa (dissertation) barattoota Oromoo dhalootaan naannoo sanii
7 thoughts on “Cinaa Qaama Keenyaa Oromoo Matakkal Haa yaadannu”
Galgaloo Sanbatoo says:
Talk, talk, talk… and more shameless talking as if talking is an end in itself. What is the real and original bygone and ongoing fundamental problems for such and similar endless negative happenstances? Haa?
To answer my own question I use an old quotation that is evergreen and still applies.
“If GOD had not blinded them (Oromos) and willed that certain families or tribes among them should be at war with one another constantly, there would not have been an inch of land in the empire, of which they were not the masters”
~Manoel de Almeida, a Jesuit priest who visited Ethiopia in the 1620s.
Oromo people should be and will be a nation which everybody seeks advise from once they uproot the wayannees.Let us not forget that we are over 45 million+ and the end of tigray elite ‘game'( Oromo vs….) from Finefinee will be over soon when all the exit blocked.
Ufilaalla dura says:
Dear Obbo Boruu Baraaqaa,
THank you veryu much for this very informative piece. I was thinking in that line and when I got the manuscript you put together I was thrilled and reserved the copy for filing.
Thank you again and kkeep it up.
Galatoomi kormakoo. Kan diinni jedhuu hin dhagahin.
ilmaan Oromiyaa matkel of beeku,namni wbo dirree dhihaa beeku tolchee beeka.
Murteessaan jabina keenya Oromiyaa guutumatti dhuunfachuuf ciiiq jettus ciiiiiiriq jettus
qaamni keenya tokko bulchinsa alagaa jalatti hin hafu goonkumaa
Boru Baraqa you teach me about wollo kamise and Rayya from the north already, you dig out what is buried!!!! leenca oromo galanni kee bilisumma haa ta’u.
“Ergan Aamina jibbee Aaminii wadaajaalleen jibbe,” jedhe namichi.
Chali Ensermu says:
Obboo Baruu Barraqaa, Maqaan kee amma booda Obboo Barreessaa tahe hafuuf deema. Garuu wani atti Barreessitu hundi bu’aa hin qabu, silaa guyyaa 1f diinaa irraati fuulleefattee qabsaawaa sin janaa garuu atti waan Qeerroo Bilisummaa oromo irraa hinafaa gudda qabdun hubadhee, Qeerroon atti gadi qabddee yaalu barbaddee Hayyuu qaroo fi Hooggaanaa Cicimioo keessaa jira hubadhu. Nama akka keeti kana dhooqqee irraa si umuu dandahu. Garaa birratin Abdi kutadhee Asmaraa keessaa deemee kan jattuu qabsaawaan qawwee badhattee garaa duwwaa boosoonaa keessaa jiru takka Abdi kutadhee hin jannee, atti garuu oromoo mararfachuu waan barbaddee fakkata , Amaalaa dhunfaa kiyya na duurrssee Namussaa dhaabaa Cabbssee achii deemee yoo jattee irraa sif waya ( amanumaa kee agarsisaa) ati rakkoo guddaa qabda.Qabsoo oromoo yaadi osoo hin tanee,faayadiyaa keef raakkata ykn dina karaa ati.Duubaa kee yaada dinaa jira.